शसांकलाई काँग्रेस सभापती बनाऊने तयारी, आरजुलाई मिल्ने भयो यती ठुलो पद - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
शसांकलाई काँग्रेस सभापती बनाऊने तयारी, आरजुलाई मिल्ने भयो यती ठुलो पद
चुनावमा पार्टीले पराजय भोगेपछि आलोचित बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पौडेल समुहका भनिएका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका छन् ।
महामन्त्री शशांक कोइराला एकाएक बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग रुष्ट बनेका छन् । उनले नेता पौडेललाई आवेगमा नआउन समेत चेतावनी दिएका छन् ।
डा. कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलको सहमतिमै पदाधिकारी मनोनयन गर्न आफूले सोमबार बोलाइएको निर्वा्िचत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गर्न सभापति देउवासँग आग्रह गरेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
पछिल्लो समय नेता कोइराला पार्टी सभापति देउवाप्रति अलिक बढि नै नरम बनेका छन् । तर, आफ्नै गुटका नेता पौडेलप्रति आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । कतिसम्म भने कोइरालाले पौडेललाई सार्वजनिक रुपमै आलोचना गर्न थालेका छन् ।
कांग्रेस निकट उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार कोइराला नेता पौडेलसँग दुरी बढाएर देउवासँग नै नजिक हुन थालेका छन् ।
१३ औँ महाधिवेशनमा पौडेल समुहबाट महामन्त्रीमा विजयी भएका कोइरालालाई आगामी महाधिवेशनमा सभापति बनाउने आश्वासन दिएर देउवाले आफ्नो समुहमा ल्याएका हुन् ।
शशांकले पनि देउवाको सहयोगमा सभापति बन्ने सम्भावना देखेपछि पौडेलसमुह छोडेका हुन् । शशांकले छोडेपछि पौडेल समुह कमजोर बन्ने देखिएको छ ।
देउवाको बाँकी दुई वर्षको सभापतिको कार्यकालमा समर्थन गरे अर्कोपटक आफू सभापति बन्ने शशांकको दाउ रहेको छ ।
शसांक सभापती, आरजु महामन्त्री :
आसन्न महाधिवेसनबाट पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने काङ्ग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवाको योजना खुलासा भएको छ । गत निर्वाचनमा पार्टिले हार बेहोरेपछी अबको महाधिवेसनबाट सभापती बन्न नसकिने निष्कर्षमा देउवा पुगेका छन ।
प्रधानमन्त्री भएको समयमा गरेको काम र सार्वजनिक अभिब्यक्तिबाट पार्टी र आफु स्वयमको शाख घटेको भेउ पाएका देउवा अर्ली महाधिवेसन नगर्ने तर नियमित अधिवेसनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योजनामा रहेको बताईन्छ ।
सभापती देउवाले महामन्त्री शसांक कोईराला पार्टी सभापती बनेमा आफु सकारात्मक बन्ने संकेत गरेका छन । देउवाको यही मनसाय बुझेका कोईराला बिस्तारै पौडेल खेमाबाट टाढिने र देउवा प्यानलबाट नै सभापतिको आधिकारिक उमेदवार बन्न सकिने बुझाईमा छन ।
जिवनको उत्तरार्धमा देउवा श्रीमती आरजुलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्छन । आरजु लाई महामन्त्री बनाएर शसांक सभापती बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।